NY FANDAHARANA TSARA INDRINDRA AMIN'NY FAMAKIANA BOKY (WINDOWS) - WINDOWS - 2019
Ny fandaharana tsara indrindra amin'ny famakiana boky (Windows)
Amin'ity famerenana ity dia hiresaka momba ny tsara indrindra aho, araka ny hevitro, programa famakiana boky amin'ny ordinatera. Na dia namaky boky tao amin'ny finday na ny tablette aza ny ankamaroan'ny olona, ​​dia nanapa-kevitra ny hanomboka mitovy amin'ny programa ho an'ny solosaina ihany koa ny e-boky, ary manaraka ny fampiharana amin'ny sehatra finday manaraka. Famerenana vaovao: Ny fampiasa tsara indrindra amin'ny famakiana boky ao amin'ny Android
Ny sasany amin'ireo fandaharana voalaza dia tsotra ary mora kokoa ny manokatra boky ao amin'ny FB2, EPUB, Mobi ary endrika hafa, mampifanaraka loko, endritsoratra ary safidy hafa ary vakio fotsiny, avelao ny marika ary manohy ny toerana izay nahavitanao farany. Ny hafa dia tsy mpamaky fotsiny, fa tompon'andraikitra amin'ny literatiora elektronika miaraka amin'ny safidy azo atao amin'ny fisintonana, famoronana famaritana, famoahana na famindrana boky amin'ny fitaovana elektronika. Ao anatin'io lisitra io dia misy ireo sy ireo hafa.
Ny fandaharan'asa maimaim-poana amin'ny famakiana antontan-taratasim-bokin'i ICE Book Reader Professional Tiako na dia nividy tranomboky aza aho, nefa mbola tsy nilaina loatra ary heveriko fa iray amin'ny tsara indrindra.
Tahaka ny hoe "mpamaky hafa" hafa, ICE Book Reader Professional dia mamela anao hampifanaraka ny fampisehoana, ny lamin'ny sary sy ny loko, hampihatra ny lohahevitra ary ny fampisehoana, ary manamboatra toerana malalaka. Manohana mafy ny horonantsary sy ny famakiana boky.
Ankoatra izany, ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny tononkalo elektronika mivantana dia ny iray amin'ireo mpitantana boky tsara indrindra hitako. Azonao atao ny manampy boky na rakitra manokana ao amin'ny fitehirizam-bokinao, avy eo dia mandamina azy ireo amin'ny fomba rehetra tianao, mahita ny literatiora havanana amin'ny sehatra, manampy ny fanoritsoranao manokana sy zavatra maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, ny fitantanana dia mahaliana sy mora takarina. Mazava ho azy, amin'ny teny Rosiana.
Afaka mandefa ny ICE Book Reader Professional avy amin'ny tranonkala ofisialy //www.ice-graphics.com/ICEReader/IndexR.html
Ny programa e-boky mahery vaika manaraka dia Caliber, izay tetikasa misy loharanom-baovaona, iray amin'ireo vitsy izay mbola mitohy hatramin'izao (ny ankamaroan'ny fandaharana famakiam-peo PC dia efa nilaozan'ny vao haingana na vao haingana teo amin'ny sehatra finday ).
Raha miresaka momba Calibre fotsiny isika amin'ny maha mpamaky azy (ary tsy izy io ihany), dia miasa fotsiny izy, manana fari-pahaizana isan-karazany amin'ny fampifanarahana ny interface ho anao ary manokatra ny ankamaroan'ny format elektronika. Na izany aza, tsy azo lazaina hoe avo lenta izy io, ary angamba, ny fandaharana dia tena mahaliana kokoa noho ireo toetra hafa.
Inona koa no azonao atao? Amin'ny sehatry ny fametrahana, dia angatahana ianao hametraka ny e-boky (fitaovana) na ny marika sy ny sehatr'ireo finday sy takelaka - ny boky manondrana azy ireo dia iray amin'ireo andraikitry ny fandaharana.
Ny singa manaraka dia fahaiza-manaon'ny fitantanana ny tranokalam-pandaharanao: afaka mahazatra ny bokinao amin'ny ankapobeny ianao, amin'ny FB2, ny EPUB, ny PDF, ny DOC, ny DOCX - tsy hiantehitra aho, saika tsy misy fanitarana. Amin'io tranga io, ny fitantanana ny boky dia tsy tsara kokoa noho ny ao amin'ny fandaharana, izay noresahina tetsy ambony.
Zavatra iray farany: Caliber koa dia iray amin'ireo converters tsara indrindra amin'ny e-book, izay ahafahanao mamadika mora foana ny endrika iombonana (satria miasa miaraka amin'ny DOC sy DOCX mila Microsoft Word ianao ao amin'ny solosainao).
Ny programa dia azo alaina ao amin'ny vohikala ofisialin'ny tetikasa //calibre-ebook.com/download_windows (manohana azy tsy Windows, fa Mac OS X, Linux ihany koa)
Fandaharana hafa tsara ho an'ny famakiana boky amin'ny ordinatera miaraka amin'ny rindran'ny fiteny Rosiana dia AlReader, amin'ity indray mitoraka ity, tsy manana andraikitra fanampiny ho an'ny fitantanana tranomboky, fa amin'ny zavatra rehetra ilaina amin'ny mpamaky. Mampalahelo fa tsy novana nandritra ny fotoana lava ny solosaina, na izany aza, efa manana ny zavatra rehetra ilainao izy, saingy tsy misy olana amin'ny asa.
Miaraka amin'ny AlReader, azonao atao ny manokatra ny bokotra maimaim-poana amin'ny format izay ilainao (FB2 sy EPUB voamarina, betsaka kokoa ny fanohanana), loko marevaka, loko, famelan-keloka, mifidy lohahevitra, raha azo. Eny ary, avy eo mamaky fotsiny, fa tsy variana amin'ny zavatra hafahafa. Mazava ho azy fa misy tsoratadidy ary tsaroan'ny programa izay nahavitanao.
Indraindray aho mamaky mihoatra ny ampahafolon'ny boky amin'ny alàlan'ny AlReader ary raha ny zavatra rehetra dia amin'ny fahatsiarovako, dia tena afa-po tanteraka aho.
AlReader lisitra ofisialy Official // //www.alreader.com/
Tsy nametraka ny Cool Reader tao amin'ny lahatsoratra aho, na dia ao amin'ny version for Windows ihany aza, fa azo ampidinina ao amin'ny lisitry ny tsara indrindra ho an'ny Android ihany (ny hevitro manokana). Tapa-kevitra ihany koa ny tsy hanoratra na inona na inona momba ny:
Kindle Reader (raha toa ka mividy boky ho an'ny Kindle ianao, tokony ho fantatrao io programa io) sy ny fampiharana hafa momba ny propriétaires;
PDF mpamaky (Foxit Reader, Adobe PDF Reader, programa Windows 8) - azonao vakiana momba izany ao amin'ny lahatsoratra Ahoana no hanokafana PDF;
Fandaharam-pianarana amin'ny famakiana Djvu - Manana lahatsoratra mitokana miaraka amin'ny fijerena programa sy programa ho an'ny Android aho: Ahoana no hanokafana ny DJVU.
Vokatr'izany dia hanoratra momba ny e-boky amin'ny Android sy iOS aho amin'ny manaraka.